Safarkii Koowaad Ee Madaxweyne Biixi; Waxyaabaha Uu Kaga Duwanaa Socdaalladii Siilaanyo Iyo Soo Dhoweyntii Madaxweyne Geele – Geeska Afrika Newspaper | Hargeisa, Somaliland
Safarkii Koowaad Ee Madaxweyne Biixi; Waxyaabaha Uu Kaga Duwanaa Socdaalladii Siilaanyo Iyo Soo Dhoweyntii Madaxweyne Geele
Hargeysa(Geeska)-Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Md. Muuse Biixi Cabdi iyo wefti uu hoggaaminayo ayaa shalay gaadhay dalka Djibouti, waxaana madaarka ku qaabilay Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele.
Socdaalkan oo ahaa kii u horeeyay ee uu madaxweynuhu dibadda ugu baxo tan iyo markii loo dhaariyay xilka qaranka, waxa ay dawladda Djibouti ku qaabishay soo dhawayn diiran, waxaanu kulan kooban oo nasasho ah qolka nasashada ee madaarka Djibouti kula yeeshay Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele. Kulamada ayaa la filayaa inay labada dawladood u bilaabmaan maanta, waxaanu weftiga Somaliland Djibouti ku sugnaan doonaa laba maalmood.
Geesta kale, waxa jiray waxyaabo ay shacabka reer Hargeysa shalay ku arkeen safarkii Madaxweyne Muuse Biixi, oo uu kaga duwanaa madaxweynihii uu talada kala wareegay. Madaxweynihii hore Md. Siilaanyo ayaa caan ku ahaa marka uu dhoofayo inay madaarka buux dhaafiyaan xubnaha golaha wasiirada, xildhibaano, madaxda dhaqanka, ciidamo gaar ah iyo haween tiro badan. Laakiin Madaxweyne Biixi ayaa taas liddigeed shalay lagu arkay, waxaanu ku dhoofay sanqadh la’aan. Lama ay socon golihiisa wasiiradu marka laga reebo masuuliyiintii weftiga ku weheliyay, madaarka laguma arag ciidamo badan oo aan ka ahayn tobaneeyo askari oo diyaaradda hoosteeda ku sugnaa. Sidoo kale madaxda dhaqanka ee buux dhaafin jiray madaarka ayaan iyaguna lagu arag garoonka diyaaradaha.
Madaxweyne Siilaanyo waxa safaradiisa dibadda u raaci jiray raxan wasiiro ah iyo xataa dad shacab ah oo aan meelna ka soo gelin nidaamka dawladnimo. Laakiin Madaxweyne Biixi waxa raacay saddex wasiir oo u muuqda inuu ku soo xulay nidaamka saami qaybsiga iyo laba taliye ciidan oo muhiim u ah wada shaqaynta dalalka jaarka.
Ciidamada Booliska ayaa caan ku ahaa inay xidhaan jidadka caasimadda Hargeysa marka uu madaxweyne Siilaanyo dhoofayo ama soo laabanayo, waxaanay tubaan jireen jidadka magaalada. Laakiin shalay ma jirin wax jid ah oo loo xidhay Madaxweyne Biixi, waxaana aad u yaraa ciidamada ku sugnaa jidadka uu madaxweynuhu marayay.
In kasta oo aan la ogeyn in isbeddelkan uu madaxweyne Biixi ka muujiyey habka safarka iyo guud ahaan dhaqdhaqaaqa madaxweynuhu, uu waari doono, lana eegayo, soo noqoshadiisa in ay wax iska beddelaan, haddana tan iyo shalay waxa ay dadku u riyaaqsanaayeen in madaxweynuhu uu shaqadiisa qabsaday isaga oo aan iyaga shaqadoodii xannibin. Meelaha sida aadka ah loo hadal hayeyna waxaa ka mid ah jidadka oo hore marka uu madaxweyne Siilaanyo dhaqdhaqaaq samayno laga dareem jiray, askar iyo xidhnaan safaf dhaadheer oo baabuur ahi isku gaadhaan, lakiin shalay aan la dareemin.
Waxaa muuqata in abaabulkii safarrada madaxweyne Siilaanyo uu ku lumi jiray waqti iyo dhaqaale saameeya qaranka , gaar ahaan caasimadda, in madaxweyne Biixi beddelaana waxa ay noqotay arrin dad badani ku bogaadiyeen.